Odessa waxaa loo yaqaan "SEA GATE quruun". Oo iridda kasta waxaa loogu tala galay in la furo. Iyadoo Ujeedada in maanka 80 sano ka hor waxaa la aasaasay "Vodniy Institute" - Gaadiidka Institute Biyaha - ugu badda iyo Odessalike ugu of dhan.
Odessa National University Maritime (ONMU) hay'ad boosaska waxbarasho, oo isku diyaarinaya ka qalin dhammaan heerarka educationalqualifying (Bachelor, Specialist, Master) masruufka buuxa ee shuruudaha shaqaalaha laanta badda iyo webiga.
Waxaa la aasaasay on June, 12 1930 sida Institute Odessa ee Water Gaadiidka Injineerro. In May 1945 Machadka ayaa loo magacaabay Odessa Institute of Marine Fleet Injineerro. In 1994 Machadka waxaa magacooda loo baxshay galay Odessa State University Maritime ah.
Marka la eego muhiimada qaranka iyo kuwa caalamiga ah ee natiijada hawsha Jaamacadda iyo in ay qayb muhiim ah horumarinta waxbarashada iyo sayniska, University waxaa la guddoonsiiyey la status National by qadaridda Madaxweynaha Ukraine on February, 26 2002.
ONMU waa hoos jooge toos ah Wasaaradda Waxbarashada Sayniska ciid of Ukraine iyo ayaa helay IV-th (ugu sarreeya) heerka aqoonsi.
In 2003 ONMU ah guul u soo dhammaystay shahaado ee nidaamka maamulidda tayada ee caalamiga ah ISO 9001: 2000.
University waa xubin ka mid ah Ururka Yurub ee Jaamacadaha (BIYAHA), South East Association Yurub Gaadiidka cilmibaarisyadii (SETREF), International Association of University Maritime (IAMU), iyo Magna Charta Universitatum. ONMU waa Isuduwaha of Network University of Central Initiative Yurub (CEI) ee Ukraine.
Tan iyo markii ay 1995 ONMU qaybqaatay Programs Trans-European of Cooperation (TACІS -Tempus) iyo Barnaamijyada CEI.
Odessa National University Maritime ayaa loo tababaray shaqaalaha warshadaha badda ee dalalka shisheeye tan 1950. Wixii muddadaas ayaa ka qalin diyaariyey 90 dalalka Yurub, Aasiya, Africa iyo Latin America.
Dhismaha jaamacadda waxaa ka mid ah 7 kulliyadood oo diyaariyo takhasusay on 12 gaarka ah iyo fuliyaan kuwii horeba shaqaalaha.
HABKA ictiraafka shahaadooyinka waxbarashada shisheeye
Iyada oo ujeedadu of fulinta dabcan gobolka muhiimka ah ee is-dhexgalka waxbarashada qaranka deegaanka waxbarashada ee caalamiga ah, fududaynta socodka tacliinta sida habka of faafo qiimaha waxbarasho aqooneed, Dowladda Ukraine ansixisay in 2000 Heshiiska Aqoonsiga Aqoonta Waxbarashada Sare ee Gobolka Yurub (Lisbon, 11 March 1997).
Sidaa darteed, nidaamka dawliga ah ee qiimaynta rasmiga ah ee shahaadooyinka waddamada kale ee waxbarashada waxaa nidaaminaya by qodobada dukumintiga kor ku xusan, oo ay ku Talooyin Kalfadhiga labaad ee ka mid ah Guddiga Guddiga Convention Lisbon oo ku saabsan Aqoonsiga (Riga, 6 July 2001), xubin ka mid ah taas oo ah wakiilka of Ukraine - oo madax ka ah waaxda shatiga iyo awoodsiinta ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Science of Ukraine, Mudane. Volodymyr Ivanovych Domnich.
hufan (cad, gaar ah, gaar ah, ahaaneed, fududeeyay, automatic) mabaadii'da iyo shuruudaha ka mid ah qiimaynta shahaadooyinka oo ajnebi ah ayaa ka mid ah waxyaabaha uu ku heshiisyada caalamiga ah ugu geesood ah oo ku saabsan aqoonsiga labada dhinac oo u dhiganta dukumentiyada waxbarashada iyo tacliinta safafka, iyadoo la raacayo oo go'aan ka soo baxay sinnaanta waxaa inta badan loogu balan qaadayo kuwa tijaabada ah waraaqaha, kuwaas oo si rasmi ah la ansixiyay (korsaday) by dawladaha ka.
Sidaa darteed, habka of aqoonsiga labada dhinac ee shahaadooyinka waxbarashada waxaa nidaaminaya by Ukraine la 14 goboleedyada, lugu daro: Jamhuuriyadda Estonia, Jamhuuriyadda Uzbekistan, Jamhuuriyadda Belarus, Jamhuuriyadda Hungarian, Jamhuuriyadda Dadka ee China, Romania, Jamhuuriyadda Slovak ah, Jamhuuriyadda Azerbaijan, Ruushka, Jamhuuriyadda Armenia, Jamhuuriyadda Bulgaria, Jamhuuriyadda Moldova, Turkmenistan, Jamhuuriyadda Kazakhstan.
Habka soo ictiraafka shahaadooyinka waxbarashada qalaad waa la oofiyaa by Wasaaradda Waxbarashada iyo Science of Ukraine, kuwaas oo, waaxda shatiga iyo awoodsiinta, halkaas oo codsadayaasha ama dadka ay idman ku saabsan waxbarashada in ay soo gudbiyaan doonaa waraaqaha sharciga ee aqoonsiga.
Dhammaan waraaqaha soo gudbiyey si loogu tixgeliyo si ay u aqoonsadaan shahaadooyin waxbarasho oo la aqbali maayo,, ay shardi tahay in ay sharciyayn jirkooda ka mid ah Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ukraine iyo weheliyay la koobi oo turjumaad nootaayo ay.
codsiyada iska yeelyeelaan 'ee aqoonsiga la tixgelin doonaa oo ku salaysan qofka muddo aan ka badnayn afar bilood laga bilaabo taariikhda la helo dhamaan macluumaadka lagama maarmaanka ah gudahood.
Liiska dukumentiyada in la soo gudbiyaa ee aqoonsiga shahaadooyinka waxbarashada waxaa ka mid ah waa:
codsiga shakhsi ahaaneed ee la firin ee aqoonsiga, waa in qeex ujeedada aqoonsiga, iyo sidoo kale wacyi habraaca loo marayo geedi socodka aqoonsi;
asalka ah oo nuqul ka mid ah dokumentiga ku saabsan waxbarashada;
nuqul ee asalka ah iyo qabsinka in dokumentiga ku saabsan waxbarashada la tilmaamayo liiska maadooyinka la wadarta tirada saacadaha waxbarasho, fasalka ugu dambeeya, liiska xagga shuqullada ku ool ah, dheer oo ka qalin waraaqaha, qaybaha kale ee habka waxbarashada;
turjumaad ah warqadaha sheegay luqad gobolka;
rasiidka on bixinta qiimaha nidaamka aqoonsiga ee shahaadooyinka waxbarashada.
Waxa intaa dheer in dukumentiyada soo sheegnay, Wasaaradda Waxbarashada iyo Science of Ukraine heli doonaan on baahida ka amar u xilsaaran macluumaadka ku saabsan xaaladda xarumaha waxbarashada, in siiyey shahaadada, iyo, haddii loo baahdo, ku saabsan siidaayay cishood ah ee dukumentiyada.
Marka lagu qiimeeyo shahaadooyinka ajnabiga, mudnaanta waxaa la siin doonaa natiijada waxbarashada, tayada manhajka, iyo mudada waxbarashada. Waxaa la moodayay, in ugu yaraan 75% oo ka mid ah maadooyinka xirfad la xiriira barnaamijka tababarka ee shahaadada shisheeye waa ogoleyn, by liiska iyo baaxadda saacadaha daraasadda, heerarka gobolka ee ku jira iyo baaxadda ee tababarka waxbarashada iyo xirfad ay khuseyso ee Ukraine. Waa in la arko waa suurto gal in la aqoonsado shahaadada shisheeye sida siman oo leh hal qaran, Si kastaba ha ahaatee ma aha in codsatay by firin, laakiin inta badan dhow ka kooban manhajyada.
Waayo, mahad celin ah oo ay go'aan ku saabsan ictiraafka, Wasaaradda Waxbarashada iyo Science of Ukraine soo saari doonaa dukumenti qaab in la go'aamiyo Wasaaradda Waxbarashada iyo Science of Ukraine.
Haddii go'aan diidmo ah, Wasaaradda Waxbarashada iyo Science of Ukraine doonaa ogeysiin codsadayaasha ee aqoonsi ka mid ah sababaha ka mid ah diidmada in la aqoonsado shahaadooyinka waxbarashada, iyo ku siin doonaan macluumaad ku saabsan tallaabooyin loo qaado iyaga by si ay u helaan aqoonsi sida ka dib.
Go'aan ka mid ah Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska ee Ukraine on diidmada in la aqoonsado shahaadooyinka waxaa lala tiigsan karaa iyadoo la raacayo habka ku siiyo by sharciyada.
Last update:16 July 18